Oziọma taa 18 Septemba 2020 na okwu Pope Francis | Blọọgụ nke ekpere
Oziọma taa 18 Septemba 2020 na okwu Pope Francis
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 18, 2020 Septemba 19, 2020
Site na akwụkwọ ozi mbụ nke St. Paul Onyeozi degara ndị Kọrịnt
Mụnna m, ọ bụrụ na a mara ọkwa na Kraịst esitela n ’ndị nwụrụ anwụ bilie, olee otu ụfọdụ n’ime unu ga-esi kwuo na mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ adịghị? Ọ bụrụ na mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ adịghị, a kpọliteghị Kraịst! Ma ọ bụrụ na Kraịst na-adịghị bilitere, mgbe ahụ anyị nkwusa bụ ihe efu, okwukwe gị kwa. Mgbe ahụ anyị na-atụgharị bụrụ ndị akaebe ụgha nke Chineke, n'ihi na megide Chineke anyị gbara akaebe na ọ kpọlitere Kraịst ma n'eziokwu, ọ kpọliteghị ya, ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ndị nwụrụ anwụ anaghị ebili. N’ezie, ọ bụrụ na e meghị ka ndị nwụrụ anwụ si n’ọnwụ bilie, a kpọliteghị Kraịst; ma ọbụrụ na Kraịst esighi n’ọnwụ bilie, okwukwe gị bụ ihe efu ma ị ka nọ na mmehie gị. Ya mere ndi nwuru na Kraist efuwo kwa. Ọ bụrụ na anyị nwere olileanya na Kraịst naanị maka ndụ a, anyị ga-enwe ọmịiko karịa mmadụ niile. No akyi no, Kristo de n’Agya ahyɛde a ɛne sɛ yɛnka asɛm no na yɛnkyerɛkyerɛ.
Site na Oziọma dịka Luk siri kwuo
Lk 8,1: 3-XNUMX
N'oge ahu Jisus gara n'obodo ntà na obodo ntà nile, n preachingzisa ozi ọma, n announzisa ozi ọma ala-eze Chineke: ndi-ozi iri na abua na ndinyom ndi emere ka aru-ha di ike site na mọ ọjọ na aru-ike: nke mmụọ ọjọọ asaa si n'ime ya pụta; Giovanna, nwunye Cuza, onye na-elekọta Herọd; Susanna na ọtụtụ ndị ọzọ, bụ ndị ji ngwongwo ha jeere ha ozi.
Na ọbịbịa nke Jizọs, ìhè nke ụwa, Chukwu Nna gosipụtara ụmụ mmadụ ịdị nso na ọbụbụenyi ya. A na-enye anyị ha kpamkpam karịa uru anyị. Ọbịbịa Chineke na ọbụbụenyi anyị abụghị uru anyị bara: ha bụ onyinye Chineke na-enye n'efu, anyị ga-echekwa onyinye a. Ọtụtụ oge ọ gaghị ekwe omume ịgbanwe ndụ mmadụ, ịhapụ ụzọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, nke ihe ọjọọ, ịhapụ ụzọ nke mmehie n’ihi na ntinye na ntughari na-elekwasị anya nanị na onwe ya na ike nke onwe ya, ọ bụghị na Kraịst na Mmụọ ya. Ọ bụ nke a - Okwu Jizọs, Ozi Ọma nke Jizọs, Oziọma - na-agbanwe ụwa na obi! Ya mere akpọrọ anyị ka anyị tụkwasị obi n'okwu Kraist, imeghe onwe anyị nye ebere nke Nna ma kwe ka anyị gbanwee site na amara nke Mmụọ Nsọ. (Angelus, Jenụwarị 26, 2020)
← Na post gara aga Gara aga post:Saint Joseph nke Cupertino, Saint nke ụbọchị maka 18 Septemba
Ọzọ Post → Post ozo:Pope Francis kelere ndị nchụàjà na-arịa ọrịa na ndị agadi n'ihi na ha ekwuwaala Oziọma nke ndụ